IVivo S1: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni | I-Androidsis
IVivo yenye yeempawu ezibheja yonke into kwi-periscope. Umenzi waseTshayina sele esishiyile iimodeli ezininzi ngolu hlobo lwekhamera yangaphambili, ngaphezulu nje kweveki edlulileyo Uluhlu lweX27 lwalunalo. Ngoku, sifumana ifowuni entsha phakathi kuluhlu oluphakathi. Ukusukela ukuba umenzi wayivelisa ngokusemthethweni iVivo S1.
Yifowuni entsha yoluhlu oluphakathi Kwintengiso. Ikhamera yangaphambili yohlobo lwe-periscope ayisiyiyo kuphela into ebonakalayo kule Vivo S1. Kuba ikwasebenzisa ikhamera engasemva kathathu kuyo. Imodeli elungileyo yeli candelo lentengiso, esele sazi ngayo yonke into.
Kwezi veki sele sikwazi ukubona iimodeli ezahlukeneyo zohlobo lwesiTshayina kweli candelo. Bonke bayisebenzisile le khamera isliding, ukongeza kwiikhamera ezintathu ngasemva. Ke kubonakala ngathi ifemi ifumene into ebasebenzela kakuhle kweli candelo lentengiso.
1 Iinkcukacha zeVivo S1
Iinkcukacha zeVivo S1
Ndiyabulela kwinto yokuba le Vivo S1 inekhamera yokuhambisa eshukumayo, umphambili wefowuni ungasetyenziswa kakhulu. Ibhendi yokubheja kwiscreen esineefreyimu ezincinci kakhulu, ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lwenotshi okanye inotshi. Ke ifowuni isondele kakhulu kumxholo wescreen sonke, ke yonke ingqumbo kwezi veki. Oku kukucaciswa kwayo ngokupheleleyo:
Isikrini: IPS 6,53 intshi ngesisombululo 2340 x 1080 pixels
Ukugcina ngaphakathi: I-128 GB (iyandiswa nge-MicroSD ukuya kuthi ga kwi-256 GB)
Cámara trasera: 24 MP ngokuvula f / 1.78 + 8 MP ngokuvula f / 2.2 + 5 MP ngokuvula f / 2.4
Ikhamera yangaphambili: 24 MP ngokuvula f / 2.0
Ibhetri: 3940 mAh ngentlawulo ekhawulezayo
Conectividad4G / LTE, i-WiFi 802.11 a / c, iBluetooth, GPS,
UbukhuluUbukhulu: 161,97 x 75,93 x 8,54 mm
U bunzima: Iigram ezili-189,5
Kwinqanaba lobugcisa siyakubona oko ngumzekelo olungileyo phakathi kuluhlu oluphakathi. Nangona kusenokwenzeka ukuba uninzi aluthandi ukhetho lweprosesa yohlobo lwesiTshayina. Kuba basebenzise i-Helio P70, ethi nangona iyiprosesa elungileyo, abaninzi bayibone ingezantsi kwale inikezelwa yiQualcomm ngokwentsebenzo. Kodwa kufuneka isebenze kakuhle kwifowuni. Ukongeza ekubeni ne-AI, eya kuba yinto ephambili kwiikhamera. IVivo Game Turbo nayo ingenisiwe, efanayo ne Xiaomi Umdlalo weTurbo o GPU Turbo kwiHuawei-Honor. Ukunyusa ukusebenza komdlalo.
IVivo S1 isebenzisa iikhamera ezintathu ngasemva. Into esiyibonileyo kutsha nje kwezinye iimodeli zohlobo lwesiTshayina kweli candelo. Sineelensi eziphambili, emva koko ikona ebanzi kwaye okokugqibela inzwa yokujula, ukongeza kwimowudi yokuma. Ikhamera enye kuphela esele isetyenziselwe umphambili. Ngaphandle koko, ifowuni isebenzisa inzwa yeminwe yomnwe ngasemva.
Njengesiqhelo kwezi meko, ifowuni ityhilwe ngokusemthethweni e-China kuphela. Okwangoku kuphela kwemarike apho ukumiliselwa kwayo kuye kwaqinisekiswa. Iimodeli zebrendi azihlali zisungulwa eYurophu, ubuncinci ayizizo zonke, ngenxa yoko ukumiliselwa kwamazwe aphesheya kungumbono.
Iya kuphehlelelwa ngemibala emibini, leyo iya kubonakala kwifoto. Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka kunye nepinki zezona sinokukhetha kuzo kule Vivo S1. Njengoko sibonile kwinkcazo yayo, ifowuni isungulwe ngokudityaniswa okukodwa kwe-RAM kunye nokugcinwa. Ke ngoko, sinexabiso elinye kuyo.
Ixabiso lale Vivo S1 e-China ngama-2.298 yuan, emalunga nama-303 eeyuro zokutshintsha. Sinethemba lokwazi okungakumbi ngokusungulwa kwayo kwamazwe aphesheya kungekudala. Nangona kunzima ukuqikelela ukuba iya kugqitywa ngaphandle kwe China. Ucinga ntoni malunga noluhlu oluphakathi lophawu lwesiTshayina?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Vivo S1: Ifowuni entsha yaphakathi kwebanga yefowuni